Ungalutholaphi uhlu lwama-laptops ahambisanayo we-Linux? | Kusuka kuLinux
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ukusatshalaliswa, Okunye
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule umngane wami ohlala e-Argentina wangibuza nge-imeyili iseluleko engingamnika sona ukuthi iyiphi i-laptop okungcono ukuyithenga ukuyifaka I-ArchLinux. Ungitshele ukuthi mhlawumbe uzothenga i-laptop ohlwini lwama-laptops e-OLX, obekuyinto efana neMercadoLibre e-Argentina, noma ngiyaqonda, ngicabanga ukuthi okufanayo EBay o I-Revolico (ngeCuba).
Sekuyiminyaka eminingana ngisebenzisa ama-laptops kuphela, ngaqala kuleli zwe le-Linux 5 noma i-6 edlule, ngenhlanhla ngaleso sikhathi ngangine I-HP Compaq tc4400, isipho esasinikezwe ubaba futhi ngakwazi ukusifanele appropriate. Kuleyaptop yeLinux njalo, ngiyaphinda ngithi, ibisebenza njalo sengathi yenzelwe yena, i-bluetooth, i-wifi, imodi ye-pc yethebhulethi, ividiyo, konke kusebenza njengentelezi.
Iminyaka yadlula ngaba nethuba lokuthola i- I-HP EliteBook 8460p okuyiyona engiyisebenzisayo njengamanje, i-ArchLinux iyangisebenzela ngaphandle kwezinkinga. Ine-video hybrid (Intel & AMD / Ati) engisebenzisa yona kuphela i-Ati, okuwukuphela kwento engasebenzi futhi kungenxa yokuthi angizange ngifune ulwazi ngayo nge-bluetooth, ngenkathi eDebian yayisebenza, ku-ArchLinux angizange ngiyifake kahle. Ngendlela, i-HP endala isasebenza futhi intombi yami inayo, isebenzisa i-Debian kuleyo laptop futhi wonke umuntu uyajabula.
Ngibe nenhlanhla ngama-laptops ami, ngoba asebenza kahle kakhulu neLinux, kepha ngiyabazi abantu abangazange babe nenhlanhla engaka (ubaba nobaba wakhe Dell kanye ne-wifi ngokwesibonelo), kulabo bantu ukuthi ngibhala lokhu okuthunyelwe, ukushiya imininingwane engaba kuhle ukuyibuyekeza ngaphambi kokuthenga ilaptop entsha ngicabanga ukufaka iLinux.
1 Ukufakwa kuhlu kweLinux-Laptop.net
2 Uhlu lwe-Hardware Oluhambisana ne-Ubuntu
3 Uhlu lwehardware esekelwayo kusuka ku-ArchLinux Wiki
4 Uhlu lwama-laptops ahambisanayo kusuka ku-TuxMobil.org
5 Thenga amakhompyutha nge-Linux Oku-Kufakiwe
Ukufakwa kuhlu kweLinux-Laptop.net
En I-Linux-Laptop.net Sithole uhlu lwama-laptops okuthi ngokusho kwawo ayahambisana neLinux.
Lapho singena kusayithi, kuvela abakhiqizi abaningana noma abakhi beelaptop, sikhetha eyodwa yazo futhi izosikhombisa amamodeli alowo mkhiqizo ahambisana ne-GNU / Linux:
Uma kwenzeka une-laptop engabonakali kuhlu, futhi uyazi ukuthi iyahambisana ne-Linux ngenxa yokusebenza kwayo okuhle, unga engeza ohlwini futhi yebo abasebenzisi abaningi bazozuza kulwazi lwakho.
Vele, uhlu ludala ngandlela thile, futhi ayikho neyodwa i-HP yami evela ku-database.
Uhlu lwe-Hardware Oluhambisana ne-Ubuntu
Ubuntu inewebhusayithi yayo uhlu lwehardware 100% ehambisana nale distro: Ikhathalogi Yezinto Ezihambisanayo Ubuntu
Lokhu kufakwa kuhlu akuqukethe kuphela ama-laptops, kepha namakhadi wevidiyo, ama-CPU, njll.
Ngokumangazayo, awekho ama-laptops ami amabili avela noma u-🙁
Uhlu lwehardware esekelwayo kusuka ku-ArchLinux Wiki
Ama-Wikis, ama-encyclopedia enethiwekhi lapho kukhona ulwazi okufanele sizondle ngalo. Kulokhu, ku-ArchLinux wiki sithola uhlu lwehadiwe elengezwe ngabasebenzisi njengehambisana nale distro: Uhlu lwehardware oluhambelana ne-ArchLinux [ArchLinux Wiki]
Ohlwini sithola ukuthi ihlukanisiwe (njengabanye) ngohlobo lwehadiwe, sikhetha ama-Laptops futhi sihlukaniswe ulwazi ngomkhiqizo / ngomenzi.
Uhlu lwama-laptops ahambisanayo kusuka ku-TuxMobil.org
Elinye isayithi elisikhombisa uhlu (olunzulu ngokuya ngabakhiqizi) bama-laptops ahambisana ne-Linux: Uhlu lwe-laptop lweTuxMobil.org
Thenga amakhompyutha nge-Linux Oku-Kufakiwe
Ngokusobala, inketho engcono kakhulu kungaba ukuthenga ikhompyutha ye-Linux ngqo, Dell inikeza amanye ama-laptops ane-Linux efakwe kuqala (Ubuntu ngqo), Ngicabanga ukuthi bathengisa kwamanye amazwe aseLatin America nase-USA. Ngakolunye uhlangothi, uma uhlala ku- España inketho engcono kakhulu kude Intaba.es, zinikeza ithuba lokuthenga amakhompyutha nama-laptops (intengo kufaka ne-VAT):
Into ekhathaza kakhulu (ngokusuka kokuhlangenwe nakho kwami) maqondana nehardware neLinux i-wifi y ividiyo. Ukugwema izinkinga nokuthi ukufakwa kwayo yonke i-hardware kulula ngangokunokwenzeka, kungcono ukuthi ube ne-Intel graphic ne-Broadcom Wifi. Uma bane- I-Nvidia o Ati njengehluzo, noma a I-Atheros njenge-wifi, izinto zingaba nzima kakhulu.
Mayelana HDD, CPU y RAM... akukho ukuphikisa, iLinux isebenza njengentelezi nganoma iyiphi inhlanganisela yemikhiqizo noma abenzi balezi zingxenye. Kumele sicabangele ukuthi i-RAM ne-CPU yethu iyashesha noma yanele ngokwanele ukuze imvelo yokuqhafaza isebenze kahle, ngokushesha.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ungalutholaphi uhlu lwama-laptops ahambisanayo we-Linux?
Mthokozisi (@ mthobisi17) kusho
Lukhona lolu hlu "ngandlela thile" oluphelelwe yisikhathi, kepha lusebenzela ama-laptops amadala hahaha, ngiyabonga,
Phendula u-Albert (@ trust17)
Ngendlela engizizwa ngayo umlayezo omningi kepha angikwazi ukuhlela okwami ​​ngaphezulu.
Nginombuzo: Yiluphi uhlelo lokuphatha noma ukulibeka ngenye indlela, uhlelo lwe-accounting olincomayo olunokwethenjelwa, okulula ukwenza izipele futhi luzinzile (njengoba ngishilo ethembekile)?
I-PS: ungenza okuthunyelwe ngakho ngazo zonke izinketho ezisetshenziswe kakhulu (ngiyazi ukuthi kukhona nezinye efwini).
Ngifakazela ukuthi iLenovo IdeaPad U510 yami isebenza kahle ne-ArchLinux 😀
Unalo ithoyizi elihle, i-SSD ihamba kanjani?
Kuhle impela. Ngafaka impande ku-SSD nokubhutha, ukuvalwa kwesistimu nokuqalisa kwe-KDE kushesha kakhulu. Vele, kufanele kuthathwe izinyathelo ezithile ukuze i-SSD ikwazi ukunweba isikhathi sayo sempilo.
Umbuzo osile: yiziphi izilinganiso?
Lapha ngikhulume ngabo 😉
UGonzalo murillo kusho
Sawubona, ngithanda ukwazi ukuthi ngabe kukhona umuntu okwazile ukufaka noma yikuphi ukusatshalaliswa kwe-Linux ku-HP dv6-6180la. Inkinga enginayo ukuthi ukuba namakhadi amabili evidiyo (i-pci Intel hd ihluzo Umndeni - i-radeon hd 6770m), umshini usebenza ku-100% we-GPU ngaso sonke isikhathi (ku-Ubuntu). Ngizamile zonke izinhlobo zezishayeli zamavidiyo futhi inkinga iyaqhubeka, futhi iqiniso ukuthi i-LINUX ayisebenzi kulencwajana. Ezithangamini ze-UBUNTU banikeza izixazululo ezithile kodwa AKEKHO olungisa inkinga.
Ngizokwazisa kakhulu ukusebenzisana kwakho.
Phendula uGonzalo Murillo
NgeKernel 3.13 entsha (ezongena ku-Ubuntu 14.04 futhi isatshalalisweni eziningi njenge-Arch neFedora) kunesici esisha esithi "Automatic GPU switching" esivula ikhadi elihluziwe le-Discrete (ATI) uma kunesidingo, kimi ngine ngithole amazinga okushisa cishe ngama-60ºC (ngisebenzisa i-kernel 3.10 ngoba ngisebenzisa i-vgaswitcheroo ukucisha imidwebo ehlukile futhi ngithole amazinga okushisa aphansi kancane), i-Ubuntu ekusatshalalisweni kwayo kwakamuva isekela iHybrid Graphics futhi ungafaka umshayeli ophethe njengoba kukhonjisiwe kule bhulogi: http://rudrageek.com/linux-now-supports-hybrid-graphics-systems-ubuntu-13-10/
Ngokuqondanayo, ngine-hybrid ku-HP yami (i-Intel HD 3000 ne-Ati HD 6400m), angikaze ngifake Ubuntu, ngisebenzisa i-ArchLinux, i-GPU yami ngokuvamile ingaphezu kuka-70 °.
Eposini engisanda kulishicilela ngikhulume ngaye: https://blog.desdelinux.net/es-tu-laptop-compatible-con-gnulinux/
Yebo ngafaka i-Debian, bekuyindaba nje yokufaka ama-Intel ne-Ati abashayeli, bese ngisebenzisa umyalo wokwenza ukucushwa kwe-Ati ne-voila, ngicabanga ukuthi yilokho engikwenzile.
Noma ungayixazululi inkinga, ngincoma ukuthi ufunde lezi zihloko, mhlawumbe nasi isixazululo:
Iseluleko engingasinikeza ukuthola ama-laptops esizowasebenzisa ne-Linux:
1- Balekela i-ATI / AMD. Ukwesekwa kwayo kuyesabeka futhi uma ungalungiseleli kahle imidwebo, ibhethri le-laptop yakho ngeke liphinde libe umngani wakho. Ikhompyutha yami ephathekayo ene-Intel + ATI yenze ukuthi ibhethri lingaze lihlale isikhathi eside kune-1h (ngokusemandleni alo)
2- Uma kungenzeka ihluzo ze-Intel. (Bengingazi nge-Broadcom wifi. Ngizoyibhala phansi!)
3- Thenga i-PC nge-Linux efakwe kuqala noma nini lapho ungakhona, noma ngabe kamuva ubeke okunye ukusabalalisa kwakho kuyo. Ngale ndlela uqinisekisa ukusebenza kwayo okufanele.
4- Gwema ukuthenga ama-laptops amasha ne-hardware entsha ngoba kunenketho yokuthi okwamanje akukho ukusekelwa kwezinye izinto.
Sanibonani nendatshana enhle!
Kushiwo kahle, yize usuku lwe-amd kulula ukufaka… kuzoba yisifingqo, futhi anginandaba nomkhiqizo, kepha ngine-laptop amd futhi iyasebenza kepha uma wazi ukuthi ungayifaka kanjani…
Inkinga akuyona ukufakwa kepha ukusebenza kukonke kwehluzo ze-AMD kuLinux kuyesabeka.
Thenga i-PC nge-Linux efakwe kuqala noma nini lapho ungakhona, noma ngabe kamuva ubeke okunye ukusabalalisa kwakho kuyo. Ngale ndlela uqinisekisa ukusebenza kwayo okufanele.
Ngikholwa ukuthi le kuyiyona ndlela ephephe kakhulu, futhi yilokho engihlose ukukwenza. Okwamanje inketho yami engu- # 1 iyiDell XPS 13, kepha ngaphandle kokuthi behlise intengo eningi ngicabanga ukuthi ngeke. Ama-laptops eSystem76 nawo ayabiza impela, okungenani lawo avela kuwebhusayithi yawo, futhi ukuthunyelwa kufanele kungezwe kuwo. Sizobona ukuthi iyiphi enginquma ngayo ekugcineni.
EColombia kunegama elingawaziwa kahle "compumax", endlini yami bebezolahla elilodwa futhi isimanga kulapho ngafaka i-cd ebukhoma ye-trisquel ne-wifi esebenza, ihambisana kakhulu ne-Linux kodwa incane kakhulu eyaziwayo
Ngikuthatha kalula ukuthi kusebenza ku-Acer V3-471
Sengivele ngiyivivinye ngenombolo enkulu yama-distros afaka i-RHEL 6. 😉
Nginentaba futhi kuyamangalisa,
Bengiyifuna ngaphandle kohlelo lokusebenza futhi ngicabanga ukuthi ngiyakhumbula ukuthi bekuyiyona kuphela lapho ungayithenga khona ngaphandle kwe-OS, ebengingayifuni kwakuyi-w8, bese ukhokhela okuthile engingakusebenzisi.
Vele ngine-Archlinux (konke okuhambisanayo) neDebian (obekufanele ngiyisebenzise okungeyona yamahhala)
Ngiyabancoma nokuningi manje njengoba benama-laptops athengeka kakhulu
Udadewethu unelaptop eneCedarTrail noma iCedarView CPU, angikhumbuli (ngicabanga ukuthi kuyafana). Kepha kusebenze kabi kakhulu. Bekufanele ngifake iWindows futhi. Qaphela wonke umuntu, qaphela leyo CPU! ukuthi empeleni udaba lungegrafu ehlanganiswe ku….
Ama-laptops angama-90% asebenza nge-linux, inkinga kwamanye amakhadi enethiwekhi noma i-wifi namadivayisi wokuthinta kukhibhodi noma ukukhanya kwikhibhodi
Ngisebenzisa i-compaq f564la eneprosesa ye-AMD, ikhadi le-nvidia video nvidia, i-broadcom wifi, isebenza kahle.
Imininingwane kuphela ukuthi uma usebenzisa i-KDE ikhadi levidiyo lishisa ngokweqile.
UVictor Salmeron kusho
Ngine-samsung np300e4e a03ve, eneprosesa ye-celeron, ihluzo ze-Intel nama-atheros angenantambo nakho konke kusebenza noTrisquel ngaphandle kwenkinga ... by the way, the support of atheros to gnu / linux has improved a lot
Phendula uVictor Salmerón
Ngiyayethemba i-HP ngoba ilaptop yami yokuqala esetshenzisiwe ibiyibanga lebhizinisi le-HP-Compaq nc6220 lapho ngafaka khona i-linux mint 8 ne-9gnome, i-centrino enezithombe ze-Intel ayifaki i-wifi noma i-bluetooth (futhi uma ngifaka i-texasinstrument card reader) kodwa yona idonsa kahle; futhi njengamanje ngine-twin HP-compaq 6910p core2 ATI ihluzo ngaphandle kwe-bluetooth ehamba kahle kakhulu neLinux Mint 13 KDE (ngaphandle kofunda ikhadi le-ricoh).
Yebo, i-HP Compaq nx6115 yami yakudala isebenza kahle ngeTrisquel 6 futhi sengivele ngiyingezile kukhathalogi ye-linux-laptop. 🙂
Siyabonga ngokusikhanyisela kwi-linux hardware.
Sengibe ngumsebenzisi we-Linux "osezingeni eliphansi" iminyaka engu-7 manje. Angizizwa ngithanda ukuzihlanganisa ne-console yize ngikwenza lapho kungekho okunye ukukhetha.
Ngikhumbula ukuthi akukho ukusatshalaliswa "okunobungane" okuguqulelwe ngokukhethekile izinkumbulo ze-SSD "disk". La ma-HD awasasebenzi. Ngingathanda ukuvuselela iqembu lami elidala ngeyodwa kodwa kuyangikhathaza ukuthi kufanele ngikufake engozini, entweni ebaluleke kangaka, ngalulekwa yithimba elithile.
Ngingathanda ukuthenga i-ultrabook kodwa ukuphela kwayo eqinisekisa i-Linux 100, iDell XPS 13… ayinayo i-HDMI ekhiphayo noma ikhadi le-SD… nayo inezinkinga zokushisa. Uma ungincoma eyodwa ngaphandle kwalezi zingqinamba ngingajabula ... ngibuke iNtaba futhi iyathakazelisa kepha iminyene impela ... omncane unedrive drive.
Into ye-Atheros ihlobene, ngoba ekuqaleni nge-AR9485 angikaze ngibe nezinkinga
Njengesincomo, ngithanda ukunezela ku-athikili kaGaara (uma ungivumela i-xD) uma ufuna ukuthenga ilaptop zama ukuthi ungaveli kumikhiqizo efana noDell, Toshiba, Lenovo, HP, IBM noma i-Samsung. Isizathu silula kakhulu, lawa makhompyutha ane "mechanism" okuthi uma wenza ushintsho entweni ethile, umshini uqobo ulahle, futhi izinto eziningi ezifakwe kule mishini zine-DRM. Qaphela, lokhu kuziphatha kungenzeka noma kungabi kuzo zonke izingxenye zekhompyutha.
Ngincoma ngokwamakhadi wehluzo, i-Intel, njalo. Futhi ngamakhadi we-Wireless Atheros njengoba ekhipha abashayeli abaningi kune-Intel noma i-Broadcom ukunikeza izibonelo ezimbili. Mayelana namakhompyutha uqobo, iMountain, i-Acer ne-Asus yizinketho ezinhle kakhulu kepha ngincoma i-Thinkpenguin, ongeke ube nezinkinga ngayo. Ngikushiya isixhumanisi: http://www.thinkpenguin.com
Ingabe uqiniseke ngokuphelele ngalokho okuphakamisayo? Ngabe unolwazi oluthile olusekela lokho okushiwoyo? Ngikubuza leyo mibuzo ngoba uqobo lwami NGINOKWAZI okuthile odabeni futhi ngiyakuqinisekisa ukuthi ezimweni eziningi, izinto ezivame ukwenzeka ukukhuphula izinga (inkumbulo kanye HDD) UNGENAYO i-DRM, futhi UMA kungenzeka ukuthi uyishintshe inqobo nje uma sikwenzela izinto ezihambisanayo; ngokwesibonelo, esimweni sezinkumbulo, ngamamojula ane-latency elinganayo, njll. Lokhu ngikwenza ngokususelwa ekuhlangenwe nakho kwami, ngoba ngithathe indawo yezinkumbulo ezimbalwa kanye nama-hard drive futhi kuze kube manje anginayo inkinga eyodwa nge-DRM kumikhiqizo efana noDell, Toshiba, HP kanye ne-IBM; Endabeni kaLenovo ne-Samsung, angikabi nalo ithuba lokuthuthuka okwamanje, ngakho-ke ngincamela ukubashiya besalindile.
Ngokuqinisekile ngokuphelele. I-DRM ikhona kumakhadi emidwebo nakwamanye amaprosesa we-Intel, ngokwesibonelo, ubuchwepheshe obufana nobuchwepheshe bokusebenzisa i-trust noma i-HDCP. Ungakuqinisekisa lokhu ngokwenza usesho olulula futhi ubheke imininingwane yezakhi. Enye yezinto ongeke ukwazi ukuyishintsha yikhadi le-Wifi ... kufanele uliyise kumkhiqizi ukuze akwenze ngoba le ndlela ayivumeli i-Hardware engasayiniwe ngumenzi. Vele ngikhuluma ngokuhlangenwe nakho, kwenzeka ngoDell eminyakeni embalwa edlule engangivumeli nokuthi ngifake iDebian elula. Ngalesi sizathu ngihlala ngicwaninga lolu hlobo lwento futhi ngihlaziya kahle izinto engizithengayo. Noma kunjalo, njengoba ngishilo kumazwana angenhla, le anomaly kungenzeka noma ingabi kuyo yonke i-hardware. Ngiyethemba ngikucacisile ukungabaza kwakho.
Ngendlela, ngikhohliwe ukufaka esinye isixhumanisi sentshisekelo lapho ungathinta khona i-database yezingxenyekazi zekhompiyutha ukuze uqiniseke ukuthi izingxenye ofuna ukuzithenga zisebenza kahle. Futhi uma ufuna, ungasiza futhi ngokungeza i-Hardware ku-database.
Ngiyabonga ngolwazi, ngizolugcina engqondweni ngokuthenga kwami ​​okulandelayo.
Iseluleko sami kungaba yi-Antergos noma iManjaro yesifaki sokuqhafaza
I-Manjaro uma uxabana ne-terminal pamac ne-octopi iyamangalisa
Into exakayo ukuthola okuthile okungahambisani neze ne-GNU / Linux ngaphandle, futhi ngokumangazayo, emhlabeni we-ARM lapho abashayeli-abashayeli - bengavamisile ukuba sesidlangalaleni - futhi sikhononda ngamabhuloki omphakathi - besusa inkululeko yakho yokufaka ezinye izinhlobo kwe-OS efanayo -
Njengoba kungekho muntu oshaya umthetho ngesibopho sokunikezela ngokuvula, noma okungenani umphakathi, abalawuli ukuqinisekisa ukusebenza kwemishini esiyithenga ngokuzayo, ama-ARM ayinkinga
Noma kunjalo ngine-AIRIS kira n7000 futhi kukhona i-distro-based distro ebizwa nge-Kirbian esebenza kule divayisi engajwayelekile, evela ku-SD, engafakeki.
Ngithenge eyodwa efakwe ubuntu, ,,,
Ngibe namakhompyutha ama-2 ane-Acer, i-laptop eyi-1 ne-netbook eyi-1 abasanda kunginika yona kulo nyaka, kodwa, ngokusho komkhiqizi, kusukela ngonyaka ka-2012, ilaptop ivela ngonyaka ka-2008 futhi ibonga uNkulunkulu wonke amakhadi evidiyo, alalelwayo, i-Wi Fi, basebenze ngokuphelele, kepha ngiyazi ukuthi esimweni sikamama one-1 Toshiba, akunakwenzeka ukufaka i-linux, nginolwazi lwami
«Sekuyiminyaka ngisebenzisa ama-laptops kuphela»
Nawu umbuzo wangempela: ikhibhodi yamanothi noma ikhibhodi yangaphandle !!?
Ngokwami, ikhibhodi ye-laptop iyanengeka ukusebenza amahora amaningi, ngakho-ke cishe njengoba nginayo ngiyisebenzisa nge-USB kbd futhi ngiphakamise kancane ngemuva ukuze ngiphume kahle.
Sawubona, ilaptop yami inguDELL brand futhi ngafaka iLinux mint futhi angikwazi ukubona amavidiyo ngaphandle kokumisa isikhashana, sengivele ngafaka kabili futhi amavidiyo ayafana futhi nomsindo umisiwe, umuntu ongangisiza?
USusana Leguizamón kusho
Sawubona. Kulesi sihloko ngibona ukuthi kunezincwadi zokubhala ezingahambisani neLinux nezinye ezihambisanayo. Angitholanga okwami ​​ohlwini ukuthi yebo. Kuyi-32-bit Exo. Ine-wi fi, ividiyo kanye nakho konke engikudingayo. Ngivela e-Argentina futhi ngiyithenge ezweni lakithi ngo-2009 ngenza imalimboleko kubantu abathathe umhlalaphansi ebizwa nge-'Mi Compu '. Ineminyaka embalwa ubudala kepha isebenza kahle, inkinga kuphela ukuthi ngiyiboleke enye yamadodana ami futhi wayisebenzisa ngokushaja ibhethri, umphumela: ibhethri likhishwe ngokushesha.
Ungazi kanjani ukuthi i-notebook yami ilungele ukufaka i-Linux?
Phendula uSusana Leguizamón
Iwebhusayithi yakwaDebian ngeke ingivumele ngibuyekeze ngakho-ke ngibeka imininingwane lapha uma kwenzeka othile eyifuna kuGoogle.
Ikhompyutha ye-IdeaPad G50-80 Intel Core i3-4005U / 4GB / 500GB / 15.6 works isebenza kahle neLinux Debian 8 (Jessie).
Ngifundile ukuthi abanye abantu bahlangabezane nephutha nge-wifi (abayazi), kepha ixazululwa ngesikhathi sokufakwa (icela abashayeli abathile, bese ubanikeza nge-usb -ukuyilanda ngaphambili iwebhusayithi yeDebian-). Zingafakwa futhi ngemuva kokufakwa ngaphandle kwenkinga.
Le laptop isebenza futhi kahle nge-Ubuntu 15.04, ngaphandle kokunikeza noma yiluphi uhlobo lwezinkinga nganoma yibaphi abashayeli.
Noma ngubani unolwazi nge-ASUS.
Ngingaluthokozela noma yiluphi usizo ngoba ngifuna ukwenza imali futhi umshini uzungeze u- $ 1200
Umhlahlandlela Wokufaka we-Arch Linux 2015